लक्ष्मीनारायण वस्त्रालय प्रकरण | चितवन पोष्ट दैनिक
लक्ष्मीनारायण वस्त्रालय प्रकरण
२०७० आश्विन १५, मंगलवार ०३:१० गते
लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयको भ्याट छली प्रकरण अहिले देशव्यापी चर्चामा छ । करोडौँ जरिवाना गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णय घोर अन्यायपूर्ण भयो भन्ने आवाज नउठेको होइन । विभागको निर्णय कुन हदसम्म अन्यायपूर्ण थियो, बिस्तारै खुल्दै जाला । तर, सतहमा आएको कुरा के हो भने व्यवसायीहरुमा कारोबार विवरण ढाँट्ने चलन रहेछ ।
भनिन्छ, नेपालको मुटु नारायणगढ हो अनि नारायणगढको मुटु सहिदचोक । व्यापारका लागि अति राम्रो सहिदचोकको प्राइम लोकेसनमा छ, लक्ष्मीनारायण वस्त्रालय । तीन दशकअघि कारोबार सुरू गरेको चितवनको पुरानोमध्येको वस्त्रालयको दैनिक कारोबार कति होला ? दिनकै लाख भन्न पनि गाह्रो मान्न नसकिने अवस्था छ । ल लाख नभनौँ– २० हजार, ३० हजार दैनिक कारोबार हुन्छ भन्दा त्योभन्दा पनि कम हुन्छ भनेर जिकिर गर्ने कमै होलान् !
संवाददाताहरुको छलफलमा लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयका सञ्चालकमध्येका लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए– मेरो वर्षको कारोबार त्यस्तै ४५ लाख रूपैयाँसम्म हुने गरेको हो । उनको कुराले कारोबार हामीले सोचेको भन्दा कमै हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । यो हिसाबले लक्ष्मीनारायणले दिनको १३ हजार रूपैयाँको हाराहारीमा कारोबार गर्दोरहेछ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उनले दिएको विवरणमा उनले वर्षको ३४ लाख रूपैयाँ कारोबार हुने जनाएका छन् । यो हिसाबले उनको दैनिक कारोबार १० हजार रुपैयाँ पनि नहुने देखिन्छ, पत्याउने वा नपत्याउने जिम्मा तपाईंको भयो । तर, उनले कर तिर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कारोबारको यस्तो आँकडा पेश गरे पनि ऋण निकाल्न बैंकमा दिनको एक लाख २० हजार रूपैयाँ कारोबार हुने कागजपत्र पेश गरेका छन् ।
लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पेश गरेको विवरण फरक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकको विवरणलाई यथार्थ कारोबार मानेर भ्याट रकम निर्धारण गरेको हो । बैंक विवरणलाई आधार मानेर भ्याट छल्यो भन्नु न्यायसंगत नभएको तर्क उद्योग वाणिज्य संघले गर्दै आएको छ । ऋण निकाल्नका लागि बैंकमा कारोबार विवरण बढी देखाउनु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् । तर, कर प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दिने विवरणभन्दा लगभग ११ गुणा ठूलो विवरण बैंकमा दिनुपर्ने कस्तो बाध्यता होला ? कत्रो आँट होला ? यो बाध्यता हो या सरकारलाई जे–जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु अटेरीपनको नमुना होइन ? प्रश्न यो पनि त जन्मन्छ नि, हैन र ?
पचास लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने पसलले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण बुझाउँदा रजिष्टर लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन अनिवार्य छैन । लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा १९ लाख ७९ हजार, ०६५÷६६ मा २२ लाख ९० हजार, ०६६÷६७ मा ३५ लाख १७ हजार र आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा ३४ लाख पाँच हजार रूपैयाँ कारोबार भएको विवरण दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सोअनुसारको विवरण पेश गरेको वस्त्रालयले बैंकमा बुझाएको विवरण भने अति नै धेरै छ । कारोबार विवरण तुलना गर्दा सानोतिनो होइन, आकाश–जमिनको फरक पाइन्छ । बैंकको विवरण यथार्थपरक होइन भन्नेमा स्वयम् उद्योगी व्यवसायी सहमत छन्, तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएको विवरण यथार्थमा आधारित थियो त ? यो बारेमा कोही बोल्दैनन् । ऋण निकाल्न वस्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नारायणगढमा आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा एक करोड ४१ लाख ७५ हजार, ०६५÷६६ मा तीन करोड ८० लाख १५ हजार, ०६६÷६७ मा चार करोड २५ लाख ७५ हजार र ०६७÷६८ मा चार करोड ३८ लाख ८२ हजार कारोबार विवरण पेश गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयलाई काटेको पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पेश गरेको वित्तीय विवरण नै यथार्थ कारोबार भएको ठहर भएको उल्लेख छ । बैंकमा पेश भएको नाफा–नोक्सान हिसाबभन्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको घटी रकममा भ्याट, थप दस्तुर, जरिवाना र ब्याज हिसाब गरेर कर निर्धारण गरेको विभागको भनाइ छ ।
‘करको दायराभित्र रहेर भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्दै आएको पसल हो । खरिद–बिक्री विवरण भिडाएर भ्याट छली भएको हो या नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्दथ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यस्तो गरेन, बैंकको विवरण हे¥यो’, चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तिलचन्द्र भट्टराईले भने । ऋण झिक्नका लागि बैंकमा पेश गरेको विवरण यथार्थ कारोबारभन्दा बढी नै हुने उनी स्वीकार गर्छन् ।
‘ऋण झिक्नका लागि बैंकमा जाँदा हामीलाई यथार्थभन्दा चार गुणा धेरै कारोबार भएको हिसाब विवरण पेश गर्न भनियो । त्यसरी एक करोड ऋण झिकेको तर अहिले त्यही विवरणलाई आधार मानेर हामीलाई कर लगाइयो’, वस्त्रालयका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठले भने । एक करोड रूपैयाँ ऋण झिक्नका लागि भरतपुर नगरपालिकाभित्रको एक बिघा जमिन धितो राखेको पनि उनले बताए ।
‘लक्ष्मीनारायणले मात्रै होइन, धितो राखेर ऋण झिक्दा बैंकले जहाँ पनि कारोबार रकम धेरै देखा भन्ने गर्छ । त्यही विवरणलाई आधार मानेर भ्याट उठाउन थाल्ने हो भने यहाँ अर्कै समस्या निम्तन्छ’, उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भने । बैंकमा ऋण झिक्न बढी कारोबार देखाउने परिपाटी देशभर नै छ भन्छन् उनी ।
विभागले भ्याट मात्रै एक करोड ७० लाख, सात हजार पाँच सय एक रूपैयाँ छली भएको ठहर गरेको छ । छली जति भयो त्यति नै जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत जोडेर चार करोड ५८ लाख आठ हजार ८२३ रूपैयाँ जरिवाना गरेको पत्र विभागले भदौ १४ गते लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयलाई दिएको थियो, जसले व्यवसाय जगत्मा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्षको जेठ २४ मा वस्त्रालयमा छापा मारेको थियो । विभागका उपसचिव भरत सुवेदीले छापा मार्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । पसलमा छापा मार्दै गर्दा बाहिर ठूलो प्रदर्शन भएको थियो । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर भीडलाई तितरबितर पार्न खोज्दा हवाई फायरसमेत भएको थियो । विभागको टोली चढेको जिपसमेत जलाइएको थियो । ‘उहाँहरु बाहिर निस्कने अवस्था थिएन, त्यसैले हामीले पानी खुवाउँदै भित्रै राख्यौँ । तर, पछि तिमीहरुले मलाई मार्न लागेको होइन ? हेर्दै जाऊ, सर्वोस्व लिन्छु भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउनुभयो । प्रतिशोध राखेर अनुसन्धान गर्दा उहाँले करोडौँ तिराउन खोज्नुभयो’, पसल सञ्चालक लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठले गुनासो गर्छन् ।
चितवनको पुरानोमध्येको लक्ष्मीनारायण वस्त्रालय वि.सं. २०४८ सालदेखि विधिवत् रुपमा कर कार्यालयमा दर्ता भएको हो । ‘लामो समयदेखि पसल चलाउँदा कमाएको जायजेथा र अन्य सम्पत्तिले पनि नभेट्ने गरेर रकम तिर्नु अन्यायपूर्ण नै हो’, चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् । राजस्व विभागको यो कदमका बारेमा चितवन उद्योग वाणिज्य संघले सरकारी निकायका मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार भेटेर कुरा राखेको छ, जुन अझै जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कानुनी उपचार खोज्ने र आवश्यक परेर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि संघले गरेको छ । तर, कारोबार ढाँट्न बैंकले बाध्य पार्छ, त्यही बाध्यताको उपज हो भनेर लक्ष्मीनारायण प्रकरणबाट छुटकारा मिल्न भने गाह्रो देखिन्छ ।